संबैधानिक प्रश्न खडा गर्दै ओली सरकारले गर्यो सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पद मुक्त – Sanghiya Online
१७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पद मुक्त गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुखरुरुलाई पदमुक्त गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिष्दको आज बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड अनुसार प्रदेश प्रमुख प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले २०७४ माघ ३ गते प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज २० मा चुनावी आचार संहिता जारी भइसकेपछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । त्यसबेला नै प्रदेश प्रमुखहरुको पद के हुने भन्ने बहस भएको थियो । तर सरकारले यसबारे थप निर्णय गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अमान्य उल्ट्याइदिएपछि सरकार रोकिएको थियो l
पद मुक्त यी हुन् सातै प्रदेशका प्रमुखहरु :
प्रदेश १ का प्रा. डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ,
प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायश्थ्य ,
प्रदेश ३ की अनुराधा कोइराला,
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख बाबुराम कुँवर,
प्रदेश ५ का उमाकान्त झा,
कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल पदमुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ अनुसार प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ । संविधानको धारा १६५ अनुसार प्रदेश प्रमुखहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ को (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि सकिनुअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई एकसाथ पदमुक्त गरेकी हुन् ।
भ्रामक समाचार खण्डन गर्दै समाजबादीले भन्यो- पत्रपत्रिकामा आएको समाचार भ्रामक र गलत
निर्वाचन नजिकिदैगर्दा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता बढ्यो, प्रचन्डलाई भेट्न राजदुत नै चितवनमा
सप्तरी घटनाविरुद्व काठमाडौंसहित देशब्यापी विरोध प्रदर्शन
यी हुन घुस खानमा च्यामपियन २० हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी, बिसै हजार छानबिनमा तानिने
सातै प्रदेशको नयाँ प्रदेश प्रमुख आजै नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी, प्रदेश २ र ५ मा के हुन्छ ?